Imihlobiso yeLuau Party - Izinto Izibonelelo
Imihlobiso yeLuau Party
Ngeetotshi ezikhanyayo, isikeyiti sotshani, kunye neentaka ezinemibala eqaqambileyo, ii-luaus zizele zizinto ezinomdla kunye nezandi. Amaqela emixholo yetropiki athandwa ngesizathu esihle. I-Luaus ingumxholo olungileyo we-soiree yasehlotyeni, kodwa inokuba yinto efanelekileyo ukuba wonwabe unyaka wonke ukuba uthatha ukuhombisa kwakho ngaphakathi.
Cwangcisa iMeko ngokuHombisa okukhulu
Nokuba unetheko lakho ngaphakathi okanye ngaphandle, imihombiso emikhulu inceda ukuseta imo yepati. Bayanceda ukudala imida yendawo yepati, ukugcina iindwendwe kwindawo efanelekileyo.
Iingcamango zeLuau Party
Iilwimi zeLuau zokupheka
ILuau Crafts yaBantwana
Amanqwanqwa amakhulu okusika amakhadibhodi anokuma ngokwawo kwaye ancede ekuphuhliseni umxholo.
I-waveee yaseHawaii - Oku iliza elikhulu ujikeleze iinyawo ezisibhozo kwaye yeyona ndlela ilungileyo yokuhombisa umcimbi wakho. Oku kunokusetyenziselwa ngaphakathi okanye ngaphandle, ukuba akukho moya mkhulu. Ingasetyenziselwa ngaphandle kokuma ukuba ibe ludonga okanye uhombiso locingo.
Imithi yesundu standee -Ezi zinto zibekiweyo amasundu amabini kwaye ingaphezulu kweemitha ezintandathu ubude. Cacisa iiparrothi ezimbalwa ezifakwe kufutshane nesiseko somhombiso owongeziweyo.
Imaski yeTiki -Ukuba ubonakalisa i-tiki bar, unokufuna ukuyisebenzisa tiki mask ume . Isigqumathelo siziimitha ezintandathu ubude. Yibeke kwikona ukuba akukho ndawo ecaleni kwebar yakho.
Iifoto zeMifanekiso kunye ne-Cutouts
Indawo yemifanekiso kunye nokusikwa kwekhadibhodi kubonelela ngemihombiso kunye nomsebenzi weendwendwe. Banokubekwa kwiikona okanye kufutshane nomnyango wokufumana iindwendwe kwiimowudi zokuzonwabisa.
Khangela amakhadibhodi amabini asikiweyo -Le yeyona ndlela ifanelekileyo yokudibanisa into enkulu yokuhombisa kunye nethuba lokufota. Ngee-intshi ezingama-75 ukuphakama, i ukusika okukhulu inezinto ezimbini ezityibilikayo, enye eyindoda kunye nebhinqa elinye, ngobuso babo busikiwe ukuze iindwendwe zibeke ubuso bazo kubo ithuba lokuzonwabisa.
Indawo yeefoto ze-DIY - Xhoma isiqwenga selaphu eludongeni kwiqela langaphakathi okanye kwicala lesakhiwo ukulungiselela umsitho ongaphandle wokwenza indawo yemifanekiso. Ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka lukhetho olufanelekileyo, njengoko luya kunika ulwandle ulwandle okanye lukhethe ilaphu elinentyatyambo yetropiki. Nikezela ngeepropu kunye nesinxibo esifana nesiketi sengca kunye luau ifoto yokuncamathela.
Ubungakanani bobomi be-luau cutout -Le intshi ye-72 ukusika kwe-luau Ibonisa bobabini abesilisa nabasetyhini abanxibe iimpahla zetropiki. Nika inyathelo lesitulo sabantwana abafutshane kakhulu ukufikelela kusiko lobuso.
Abacwangcisi bemeko kunye neeProps
Iiseti zeteyiphu okanye iiseti zangasemva eludongeni kunye nezixhobo zokuhombisa iikona, iitafile kunye nokungena
Amscan Konke kuLuwe ukuHombisa ukuSeta
Ukuqubha kukakrebe - Xhoma ezi khadibhodi zenyawo zintlanu zide ipropu yokrebe ukusuka kwindawo yesilingi ukunika indawo yakho indawo yokuziva ubushushu. Ukuba wenza iqela lakho ngaphandle, unokuncamathisela oku emthini okanye kwiposi yocingo okanye uyixhome kwisebe lomthi eliphezulu.
Indawo yeLuau - Iplastiki enkulu indawo yodonga ukunceda ukuseta imo yepati yakho. Oku kusetyenziswe kakuhle ngaphakathi, kodwa kunokusetyenziselwa eludongeni lwendlu yeqela elingaphandle. Indawo ebekiweyo ibandakanya iindawo ezimbini ezinkulu ezibonisa iintloko zetiki kunye neentaka zetropiki. Imiboniso ingaphezulu kweenyawo ezisibhozo ubude.
Umthi wesundu onokutshitshiswa - Oku umthi wesundu ofudumeleyo ziimitha ezintandathu ubude kwaye ilungele iqela elingaphakathi. Unokwazi ukuwusebenzisa kwisiganeko sangaphandle ukuba akukho moya.
Sebenzisa iphepha elinemibala okanye itafile yeplastiki ukuhombisa itafile yakho, kodwa unokukhetha kwakhona i-buffet kunye neetafile zeendwendwe ngezixhobo ezimnandi zetropiki.
Iintyatyambo zaseTropiki ziyimfuneko kuyo nayiphi na i-luau kwaye iya kudala indawo efanelekileyo nokuba ungaphakathi ebusika okanye ngaphandle kwimozulu engeyiyo yetropiki.
umdala kangakanani ukuba uphume uphume endlwini yabazali bakho
Intyatyambo yeTropical lei -Thenga izinto ezibonisa ezinye iintyatyambo zesilika ezintle . Sebenzisa ii-leis ukuhombisa iitafile kunye nezinto ezilungileyo kwiindwendwe.
Intaka-yeparadesi - Ezi ntyatyambo zixhaphake kwimihlobiso yetropiki. Sebenzisa ezi ntyatyambo zinemibala kumalungiselelo etafile ukuhombisa indawo yeqela lakho. Iintyatyambo zingathengwa kwiivenkile zeentyatyambo okanye kuthengwe iziqu ezenziweyo.
Intyatyambo yeTropical fringe - Oku ingubo yetafile yengca iquka i-tropical flower trim. Iziketi ziya kongeza imeko entle yetropiki kwiitafile zakho zendawo.
Ukuhonjiswa kokutya nokusela
Khetha umxholo wetropiki yokutya ukuhombisa itafile yakho.
Ivatala ecandiweyo - Ivatala inokubhalwa kwimixholo emininzi yetropiki kubandakanya intyatyambo yetropiki, ukrebe, okanye uyilo nje lokuhombisa.
Iiglasi zeqokobhe lekhokhonathi Ukuhambisa iziselo ngeqokobhe lekhokhonathi kuya kwenza iindwendwe zakho zive ngathi ziyaziphumla elunxwemeni. Ukuba awufuni kunika iziselo kwiikhokhonathi zokwenyani, cinga ukuthenga ezi iikomityi zeplastiki zecoconut .
Sela iiambrela - Sebenzisa incinci sela iiambrela kwipinapple juice okanye ezinye iziselo okanye njengokucoca amazinyo kwipleyiti yeziqhamo.
Iziko lendlela ziindlela ezifanelekileyo zokuhombisa iitafile.
Iqela le-seashell ye-DIY - Qokelela izinto zeetropiki ezinje ngamaqokobhe kunye namatye kumbindi wetafile kwindawo enomtsalane nengabizi kakhulu. Unokongeza iziqwenga ezincinci zentambo okanye inqaku kwibhotile kwindawo yakho esembindini okanye kumakhandlela okuvota kwiigobolondo ezinkulu ezinesanti. Unokukhetha ukongeza amancinci, acocekileyo okanye aluhlaza okwesibhakabhaka amatye omlambo ukongeza umbala kunye nokubengezela.
Umthi wesundu omncinci - Ezi mini-palm tree centerpieces iya kunika ukuphakama kwiitafile njengoko zine-intshi ezili-17 ukuphakama.
Indawo ephambili yeTiki - Ezi I-tiki mask kwiziseko Faka iincopho zamyllam ezodlamkileyo eziya kongeza umbala kwitafile yakho.
Iimpawu kunye neGarland
Sebenzisa imiqondiso kunye nezidanga ukuxhomekeka imiyalezo kunye nemibuliso kwiindwendwe.
Ibhodi ebhodini ye tiki ye-DIY -Nika iindwendwe zakho uvakalelo lwe-tiki bar yokwenyani ngokwenza imenyu ebhodini ebonisa ukhetho lokutya lweendwendwe. Sebenzisa ibhodi enokwenene enebhokhwe emhlophe ukwenza inkangeleko okanye usebenzise usiba omhlophe wokuloba kumbindi wegwebu elimnyama ukwenza ukujonga okufanayo. Bhala imenyu ebhodini kwaye ukuba unobugcisa, ungongeza eminye imifanekiso enjengeemaski ze-tiki, intlanzi okanye imithi yesundu ukuhombisa imiphetho yebhodi. Ungayifaka ebhodini ibhodi kwaye uyixhome eludongeni okanye uxhase uphawu lwakho kwitafile yakho yokutya.
Aloha sign standee - Yithi 'Aloha' ekungeneni kwetheko. Oku ibhodi yeplanga yomthi iyakwamkela iindwendwe emnyango.
Umbala weentyatyambo ezimibalabala - Xhoma oku umbala weentyatyambo ezimibalabala kwiminyango okanye ngeenxa zonke iifestile ngaphakathi okanye phakathi kwemithi yeqela elingaphandle.
Inkwenkwezi yeStarfish - Hombisa ngale nto Isithsaba segolide ebonisa iinkwenkwezi zeentlanzi kunye namaqokobhe olwandle. Isebenza kakuhle ukuba ujonge ngaphezulu kwe-beachy luau kunokuba ube ne-tiki themed luau.
Ezinye iingcamango zokuhombisa
Ungalibali ngokukhanyisa kwaye ukhumbule ukuba ungongeza kwiibhakethi kunye neebhaluni, nazo.
Iitotshi zeTiki - Sebenzisa Iitotshi zetiki ukukhanyisa indawo yangaphandle yeqela. Lumka usebenzise ezi thotshi, ngakumbi xa ujikeleze abantwana, njengawo nawuphi na umhombiso onxulumene nomlilo.
Amabhakethi aselwandle - Sebenzisa amabhakethi amibalabala ukubamba amashwamshwam afana neetshiphusi kwaye usebenzise imihlakulo njengeepuni. Unokusebenzisa iipeyili ukubamba iiglasi zelanga okanye iflip flops ukuze iindwendwe zizisebenzise.
Iibhaluni Iibhaluni zinceda ukudala itheko lokonwaba kuwo nawuphi na umxholo, kubandakanya i-luau. Sebenzisa Iibhaluni zemixholo yetropiki kukhetho olulula lokuhombisa.
Imeko yeLuau yeNdalo ingaphezulu kweDecor
Amaqela aqulathe ngaphezulu kokuhombisa. Ungaseta imo yepati ngokudlala umculo wefriji kwaye ufundise iindwendwe zakho ukudanisa i-hula. Enye indlela elungileyo yokunceda iindwendwe zakho ziziva zonwabe ngakumbi kukutya ukutya okufudumeleyo. Ukongeza nje iintyatyambo ezimibalabala kunye nokudlala imidlalo enje nge-limbo kuya kunceda iindwendwe zakho ziziva ngathi zikwiholide kunakwitheko.
Ubambiso Ukuhlawula Amatyala Ikrisimesi Izipho Umsele Usapho Travel Ukufumana U Umsebenzi
Amanzi Park And Water Slides
Ukutya Oku Empilo Iimeko
intaba yesayensi yokutya ukutya kwekati
ikati yafa amehlo evule ulwimi
Yintoni onokuyipheka kwihovini yokubhaka
I-avareji yeemayile ebekwe kwimoto ngonyaka
ukuphakama komndilili oneminyaka eli-13 ubudala
indlela yokwenza umama ukuba abe corsage
ndingamfumana njani umntu simahla